ब्रोकरहरुलाई भ्याटको तनाव ! आन्तरिक राजश्वले पत्र काटेपछि धीतोपत्र बोर्ड गुहार्दै ब्रोकर एसोसीएसन !
ARCHIVE, TAX, कर तथा कानुन » ब्रोकरहरुलाई भ्याटको तनाव ! आन्तरिक राजश्वले पत्र काटेपछि धीतोपत्र बोर्ड गुहार्दै ब्रोकर एसोसीएसन !
काठमाडौँ - सेयर ब्रोकरहरु भ्याटको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै आन्तरिक राजश्वले पत्र काटेपछी ब्रोकरहरु तनावमा परेका छन् । विभागको पत्रपछि अहिले १०:३० बजे ब्रोकरहरु समूहनै बनाएर नेपाल धीतोपत्र बोर्ड पुगेका छन् ।
भ्याटको दायरामा ब्रोकरहरु आउनुपर्ने भन्दै यसअघि महालेखाले ब्रोकर हाउसहरुको बेरुजु देखाएको थियो । यसैलाई टेक्दै आन्तरिक राजश्व विभागले ब्रोकर हाउसहरुलाई पत्र काटेको थियो ।
धीतोपत्र बोर्डबाट पनि यो कुरालाई उचित सम्बोधन नभए आद्नोलनमा जाने ब्रोकरहरुको तयारी गरेको बुझिएको छ । विशेष स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आज विहानभर बैठक बसेर धीतोपत्र बोर्ड गुहार्ने निर्णय ब्रोकरहरुले गरेका थिए ।
Tags : ARCHIVE, TAX, कर तथा कानुन